WILL NEPALESE PEOPLE BRING MONARCHY BACK ? | The Himalayan Voice
WILL NEPALESE PEOPLE BRING MONARCHY BACK ?
[Posted below isashared article with Ruparekha Online Weekly from Kathmandu. The author, as usual excoriates Sonia Gandhi, the Congress - I, Indian Government and also its Research & Analysis Wing - RAW,aspy agency whose immense 'power and presser' nowadays the Kathmandu leaders apparently can't resist. Decrying all the time - both republicanism and federalism, he virtually is one of the country's steadfast monarchists wanting again the 2008 ousted monarchy back in place and for which he doesn't even hesitate invoking Nepal's National Army that, actually had not been able to defeat the Maoist rebels, to assumeagreater role together with the 'nationalist' forces to oust those, he names 'the traitors'. His worry about religious conversion or in other words, Christian conversion, does not seem to be happening in Sonia Gandhi's direction but it is the country's brazen loot these days that has also resulted in the acute privation he should have likened. The monarchists are back in Kathmandu and also while onamission to Upper Mustang in August 2001, I had seen the slain King Birendra's family portraits hanging on the people's house walls. The Boston born mountaineer James Ramsey Ullman had also seen Nepalese people taking King Mahendra's 'foot-dust', deemed 'sacred' to put on their foreheads as the 'believed to be' incarnation of Vishnu he was, after the 1960 seizure of power, while onaroyal tour of the country. As the Maoists seem to have heavily oriented rural folks against monarchism, both the federalists and non-monarchists hold waters and heavier hands in the country. - The Blogger]
गणतन्त्रबाट यो देश सम्हालिन सक्दैन
लेखक दीर्घराज प्रसाई
नेपालको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि नेपाल र यहाँका सम्पूर्ण जातजाति, धर्म, संस्कृति भाषभाषीहरुको संरक्षकको रुपमा नेपालको राजसंस्थालाई मानिन्छ । राजाकै नेतृत्वमा ५४ भन्दा बढी ससाना राज्यहरु सम्मिलित भएर नेपालअधिराज्य बनेको हो । भारतलाई अंग्रेजी साम्राज्यले खाइसकेको थियो । नेपालका स–साना हिन्दु राज्यहरुलाई कब्जा गर्ने रणनीति अंग्रेजले बनाइसकेको थियो । त्यो अवस्थामा अंग्रेजी साम्राज्यसँग भिडेर नेपालको एकीकरण भएको हो । नेपालको एकीकरण भएपछि ती थुप्रै सानाराज्यका सम्पूर्ण जनताले नेपालको राजालाई विश्वाशिलो संरक्षकको रुपमा मानें । दुई ठूला राष्ट्रहरुको च्यापोमा परेको यो सानो देश र यहाँका विविध संस्कृति र परप्परामा आवद्ध नेपालीहरुलाई राष्ट्र्यिताको डोरीले कस्न सक्ने आधिकारिक स्रोतको रुपमा नेपालको राजसंस्थालाई नै इतिहासले प्रमाणित गरेको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले यो तथ्यलाई नकार्न सक्ने ठाउँ नैं छैन । यी सबै तथ्य बुझ्दा बुझ्दै किन विदेशीले दबाब दिदैमा नेपालका पार्टीका नेताहरुले विदेशीको भरिया बनेर किन नेपालमा गणतन्त्र स्थापित गर्न खोजे । पार्टीका नेताहरुका गल्तीहरुले गर्दा अहिले देश खरतामा परेको छ भने राजसंस्था घानमा परेको छ । माओवादी समस्या राजाले उब्जाएको समस्या नभएर २०४८ सालपछि नेपाली कांगे्रस र नेकपा (एमाले)का सर्वसत्तावादको लुटतन्त्रको परिणति थियो । यस अवस्थामा के गणतन्त्र देशको सामाधान हुनसक्छ त ? कदापि गणतन्त्रबाट यो देश सम्हालिन सक्तैन ।
विश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्य नेपाल र विश्वका हिन्दुहरुको लागि गौरवमय पहिचान हो । हिन्दुअधिराज्यभित्रका सम्पूर्ण जाती, धर्म, संस्कृति, परम्परा र देशको सार्वभौमसत्तालाई बचाएर हिड्नसक्ने एकमात्र स्थायित्व कायम गर्नसक्ने नेपालको राजसंस्था हो । २०६३ सालपछि हिन्दुअधिराज्य र राजसंस्था पाखा लगाएर देशलाई अन्धकार भविष्यतर्फ धकेलिएको छ ।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीयता भन्ने कुरा नेपालका सार्वभौम अस्तित्व, एकता र पहिचान सिद्धयाएर नेपाललाई कब्जा गर्न भारतीय कांग्रेस (आई) की सोनीयाँ गाँधी र बदनाम गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को दबाबमा नेपालका कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीका केही गद्दार नेताहरुलाई प्रयोग गरेर २०६३ सालपछि भित्रयाइएका राष्ट्रघाती बुँदा हुन् । छिमेकी देशहरुलाई कब्जा गर्न र तडपाउन सोनीयाँकी सासु इन्दिरा गाँधीबाट खोलिएको हो त्यो बदनाम गुप्तचर संस्था ‘रअ’ । कांग्रेस र एमालेको कुशासनबाट उठेको थियो माओवादी बिद्रोह । राजदरबार हत्याकाण्डपछि नेपालका माओवादीले राजासँग सहकार्य गर्न लागेको थाहा पाएपछि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का तत्कालीन नेपाल प्रमुख पी. हर्मीजको सक्रियतामा माओवादीलाई भारतमा सुरक्षासाथ तालीम दिएर राखिएको थियो ।
केरलाका पी. हर्मीज क्याथोलीक क्रिस्चियन भएको र माओवादीहरुभित्र पनि धेरै क्रिस्चियन भएकाले माओवादीलाई संझाउन उनलाई सजिलो भएको थियो । माओवादीका बाबुराम भट्टराईसँग उनको पहिलादेखि नैं संवन्ध रहेको र बाबुराम पनि पनि क्याथोलीक भएकाले उनीहरु बीच घनिष्ट संवन्ध कायम हुन स्वाभाविकै थियो । त्यहीकारणले पी. हर्मीजले बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो जन्मथलो केरलामा पनि केही दिन पाहुना बनाएका थिए । दरबार हत्याकाण्डपछि बाबुराम भारतपरस्त र प्रचण्डको राजा परस्त हुन लागेको अवस्थामा यी दुबै माओवादीबीचको झगडालाई पी. हर्मीजले मिलाएर २०५९ सालदेखि नैं भारतमा पु-याएका थिए । त्यसपछि पी हर्मीजलाई पुरस्कार स्वरुप भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को प्रमुख नियुक्त भए । सोनीयाँ गाँधी पनि क्याथोलीक भएकाले यी तीन जना नेपाल र भारतमा इसाईकरण गर्नमा आवद्ध भएका थिए ।
अहिले भारतमा सत्ता फेरिएको छ । सोनीयाँ गाँधी तथा उनका भरियाहरु लाखापाखा लागेका छन् । नेपालमा पनि २०६२ साल मंसिर ७ गते १२ बुँदे सहमतीमा हस्ताक्षर गर्ने गद्दार पार्टीका नेताहरु पनि अताल्लिएका छन् । नेपालमा हास्यास्पद रुपले गणतन्त्र दिवस मनाउने गरेको छ । हेरौं ! अव कसरी यिनीहरुले नेपालमा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता जस्ता राष्ट्रघाती बुँदाहरुको समर्थन गरेर कसरी अगाडि बढ्लान् । अव पनि २०६२ सालदेखि भारतीय गुप्तचर संस्थाका भरिया बनेका कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरु उही पुरानो राष्ट्रघाती बाटो हिड्न खोजिरहे भने यिनीहरु जनताको कठघरामा उभ्याइन सक्छन् ।
तर भारतमा जनता पार्टी (बीजेपी) सत्तामा आयो भन्दैमा सबै भारतले गरिदिन्छ भनेर सोच्ने कुरा हाम्रो होइन । जेहोस्–सोनीयाँ गाँधी र उनको गुप्तचर संस्था ‘रअ’लाई त नरेन्द्र मोदीले भारतबाट लखेटेका छन् अव कुनै हालतमा त्यो कांग्रेस (आई)को सैतानी सत्तालाई भारतीय जनताले काखी च्याप्ने छैनन् । अव सोनीयाँ गाँधीको सत्ताले भारतलाई पूर्ण इसाईकरण गरेर डुबाउन खोजेको र एकछत्तरुपमा सत्ता कब्जा गरेर चौतर्फी ब्याप्त भ्रष्टाचार गरेकोमा अव उनीहरु कारवाहीमा पर्न सक्छन् । त्यो नैं हामी नेपालीहरुको लागि खुसीको कुरा हो ।
भारतमा भारतीय जनता पार्टीका हिन्दु राष्ट्रवादी नेता नरेन्द्र मोदीले अध्यधीक मत ल्याएर भारतको प्रधानमंत्री बनेर भारतलाई कब्जा गर्नसक्ने देखेर भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र राजीव गाँधीकी विधवा, इटालीयनमूलकी क्याथोलीक सोनीयाँ गाँधीका विश्वासप्राप्त बनेका कांग्े्रस एमाले, माओवादी नेताहरु अत्तालिएका छन् । २०६३ सालपछि नेपालका कांग्रेस, एमाले माओवादीका पार्टीका नेताहरुले भारतीय गुप्तचर संस्थाको आडमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेर जसरी नेपाललाई लथालिङ्ग बनाएका छन् जुन आज यिनीहरुको लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । नरेन्द्र मोदी सत्तामा आउने बुझेपछि नेपालका बाबुराम भट्टराईले लाज पचाएर हतार हतारमा मोदीलाई बधाई दिनपुगे । प्रधानमंत्री सुशील कोइराला अनिर्णयको बन्दी भएका छन् । माधव नेपाल, झलनाथ र प्रचण्डहरुको गद्दारीको पोल खुल्छ भनेर छटपटाइरहेका छन् ।
सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमंत्री मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सुजाता कोइराला जस्ता चाहिदा नचाहिदा भ्रष्ट तोरलिारेहरु बोकेर पुगेकाले भारतीयहरुको नजरमा बैइज्जती हुनु परेको थियो । भारतीय भ्रमणको बेला सुशील कोइरालाले परराष्ट्र मंत्री महेन्द्र पाण्डेलाई एमालेको भनेर साथ लिएनन् । यो एउटा उनको संकृर्णता थियो । उनले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी लगायत आडवानीसँगको भेटमा नेपालमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गरेर संविधान बनाउने भन्ने सोनीयाँ गाँधी र उनको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को दबाबमा नेपाललाई क्रिस्चियनकरण गर्ने बकम्फुसे कुरा र व्यवहारले उनीहरुले आत्मीय व्यवहार गरेको देखिएन ।
उनीहरुले मुख चपाएर ‘यो तपाईहरुको आन्तरिक मामिला हो, नेपाल हिन्दुहरुको थलो भएकाले हामीले त हिन्दु राष्ट्र कायम गरौं भनेका हों, जे गर्नु छ गर्नुस्’ भनेर पठाइदिए । तर वास्तवमा नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्रको रुपमा कायम रहिरहोस् भन्ने बीजेपीको मूलनीतिभित्रको कुरा हो । नेपालमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको पक्षमा सोनीयाँ गाँधीको बाटोलाई नैं निरन्तरता दिलाउनुको मत्लव आत्मघाती हुनछ भन्ने कुरा बीजेपीका नेतालाई थाहा छैन र ? नरेन्द्र मोदीलाई हिन्दुत्वको अस्तित्व कायम गरेर भ्रष्टाचार बिरुद्ध सक्रिय बनछन् भनेर नैं भारतमा बीजेपीको पक्षमा जनलहर आएको हो ।
हुनता बीजेपीको हवालादिदै कोही भन्ने पनि गर्छन्–‘नेपालमा हिन्दुराष्ट्र तथा राजसंस्था पुनसर््थापनाको पक्षमा कहिले पनि बीजेपी बोल्ने छैन’ भन्ने पनि छन् । उता सुशील कोइरालाले सोनीयाँ गाँधीका चम्चम मन मोहन सिंहलाई भेटे र उनले ‘गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष यथावत रहन्छ’ भनेर मनमोहन सिंहबाट आश्वासन पाए । त्यस्तै सुशील कोइरालाले नेपाललाई वरवाद गराउन षडयन्त्रकारी भुमिका खेल्ने अहिलेका राष्ट्रपति प्रणव मुकर्जीलाई नेपालको भ्रमणमा बोलाएर भाजपालाई चुनौति दिने बकम्फुसे सोचाई गरेका होलान् । सुशील कोइरालालाई थाहा छ कि नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता भन्ने कुरा कांग्रेस (आई) की सोनीयाँ गाँधी र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को एजेन्डा थियो ।
सोनीयाँ गान्धी र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ भनेको भारतीय जनता पार्टीलाई समाप्त गरेर सम्पूर्ण भारतलाई इसाईकरण गरेर भारतमा हिन्दुहरुको अस्तित्व र पहिचान समाप्त गर्ने सैतानी व्यवहारबाट उनीहरु चीरपरिचीत छन् । उनीहरुलाई थाहा छ कि नेपालमा हिन्दुअधिराज्य, राजसंस्था समाप्त गरेर नेपाललाई इसाईकरण गर्ने कांग्रेस (आई)को कालो सत्ताको समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई भारतीय जनता पार्टीबाट कसरी समर्थन हुन्छ ? प्रधानमंत्री सुशील कोइराला र उनका यहयात्रीहरुको कुरा बुझैपछि भाजपाका अध्यक्ष राजनाथ सिंहले उनलाई भेट्न नैं चाहेनन् । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयताका समर्थन गरेर अहिले भारतमा जानु हुन्न भन्ने कुराले सुशील कोइराला मोदीको सपथग्रहण कार्यक्रममा नजान आलटाल गर्न पनि खोजेका थिए । तर उनी भारतको भ्रमणमा गएर इज्जत बढाउनुभन्दा भन्दा बेइज्जती भए ।
अर्कोथरि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको बारेमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ भन्ने तर्क झिक्नेहरु पनि छन् । विदेशीको दबाबमा नेपाल डुबाउन थोपरिएका बुँदा बारेमा जनमत संग्रह गरेर नेपाललाई विभाजित गराउन खोज्ने कुरा हो । यो त नेपाल राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमतसंगह गरौं भनेको जस्तै हो । राष्ट्रका अस्मिता, पहिचान बारेमा जनमत संग्रहको मुद्धा उठाउनु भनेको राष्ट्रघाती कुरा हो । यस्ता अनर्थका कुरा गरेर प्रजातन्त्रवादी हुन खोज्नु अर्को धोका हो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र जातीय आधारको संघीय राज्य भनेको कांगे्रस, एमाले, माओवादीको एजेण्डा नै होइन ।
विदेशीको इशारामा ती पार्टीका नेताहरुले २०६३ सालपछि जवरजस्त उठाएको नेपाल डुबाउने एजेण्डाहरु हुन् । २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा कांगेसी, एमाले र माओवादीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीयताको हलला गरेरै देशभित्र ब्रम्हलुट मच्चाएका छन् । यिनीहरुले राष्ट्रको हितमा बिगार्ने बाहेक एउटा पनि राम्रो काम गरेका छैनन् । अव पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गराएकोमा महान उपलब्धी ठान्नेहरुलाई हामीले गद्दार भन्नु पर्छ । २०६३ सालपछि कथित गणतन्त्र घोषणा गरिएको भनिएको बेलादेखि अहिलेसम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा देश डुब्ने स्थितिमा छ । जवरजस्त गणतन्त्र ल्याउन खोजेको परिणाम नैं हो यो । यिनीहरु कहाँबाट निर्देशित छन् र नेपाललाई कस्तो हातमा जिम्मा लगाउँदै छन् भन्ने कुरा बितेको ७ बर्षले बताइसकेको छ ।
हो, स्वछन्द परिथितिमा राजसंस्था, हिन्दु तथा बौद्ध अधिराज्य बारेमा जनमत गरियो भने ९५ प्रतिशत मत आउँछ । जनमत संग्रह हुँदाको अवस्थामा विदेशीहरुले पालेका नक्कली मान्छेहरुले देशभक्तहरुको बिरद्ध पैसाको खोलो बगाएर आगो बाल्न सक्छन् । उनीहरुले राष्ट्रलाई दलदलमा फसाउन आगजनी, हत्या, अपहरण, बन्द आदि इत्यादि प्रकारले आतंक मच्चाएर विदेशी पैसाको भरमा जे पनि गर्न सक्छन् । त्यस्तो बेलाको जनमत संग्रहको के मत्लव हुन्छ ? हो, राजसंस्था बीना पनि नेपाल बाँच्छ भने विवाद गर्नुपर्ने अवस्था रहदैन । तर नेपालमा राजसंस्था विस्थापित गरिएको भनिएको बेलादेखि नेपालमा चौतर्फी संकटले सीमा नाघेको छ । इतिहासका भूलहरुबाट सचेत भएर काम गर्न नचाहेकाले इतिहासका धेरै सत्यहरु झुठा साबित हुन पुगेका छन् । यसले गर्दा नेपाल सम्हालिन नसक्ने अवस्थामा पुगेकोछ । कांगे्रस, एमाले, माओवादीका नेताहरुले मुख देखाएर हिड्ने अवस्था छैन । उनीहरु पूर्ण नाङ्गिइसकेका छन् ।
पदीय भागबण्डा, पैसाको अगाडि उनीहरुमा राष्ट्रियता बारेमा कुनै चासो छैन । यो अवस्थामा राजसंस्थाको निरन्तरता अपरिहार्य छ । यो देश बचाउने हो भने नेपालमा राजा, राजनीतिक दल र जनताको संयुक्त प्रयासमा देश निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत सबै पार्टीभित्र प्रसस्त राष्ट्रवादीहरु छन् । पार्टीभित्रका देशद्रोहीहरुलाई पार्टीबाट हटाएर पार्टीभित्रका राष्ट्रवादीहरु खुलेर अगाडि आउन सक्नुपर्दछ । देशभित्र आगो लागेको छ । आगो बढदै गएपछि निभाउँन सजिलो हुँदैन ।
नेपालका राजाको लागि नेपालभन्दा प्यारो र नजिकको कुरा केही छैन । नेपालको राजा कुनै विदेशीको कठपुतली बनेर टिक्न चाहदैन । सम्राज्यवादी शक्तिसँग लडेर स्थापित शक्ति हो – राजसंस्था । यस हिसावले हामी भन्दा राजा स्वभावैले देशभक्त हुन्छन् । अतः अव माओवादी लगायत सबै दलभित्रका देशभक्तहरुले सकारात्मक सोच राखेर राजाको सदासयता बुझेर नेपालमा राजसंस्थालाई एक अपरिहार्य संस्थाको रुपमा निरन्तरता दिलाउन सक्रिय हुनुप¥यो । जर्मनीहरुको एउटा उखान छ– ईश्वरले सुपारी दिन्छन् तर खाऊ भनेर फुटाएर दिदैनन् । त्यस्तै हामीसँग देश छ ।
यो देश बचाऊ भनेर ईश्वरले हतियार दिने होइनन् । हामी नेपाली आफैले सम्वेदनशील भएर राष्ट्रलार्इृ हिडाउन सक्नुपर्दछ । देशको वस्तुस्थिति अध्ययनगर्दा नेपालमा राजसंस्थालाई विस्थापित गरेर देशको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बचाएर अगाडि लान सकिदैन । यो कुरा त २०६३ सालपछिका दिनहरुले बताइसकेका छन् । अतः अव राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग– अदालत, नेपाली सेना, सुरक्षा स्रोत, निजामती लगायत हर क्षेत्रका देशभक्त नेपाली जनताको अगाडि समर्पित हुने प्रणगर्दै देशलाई बचाउन सक्नुपर्दछ । पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि सुदृढ बन्दै आएको राष्ट्रिय सेनाले यसरी देश डेब्न लागेको टुलुटुलु हेरेर बस्नु देशलाई नै धोका दिनु हो । अतः राज्यका सम्पूर्ण स्थायी अङ्ग, नेपाली सेना तथा देशभक्तहरु संयुक्तरुपमा देश बचाउन अगाडि आउने बेला यही हो ।
@ Ruparekha Weekly